Njikwa Nchọpụta Ngosi Outsource. Kedu ihe ọ bụ?
Outsourcing abụghị echiche ọzọ. Ọ dị adị ruo oge dị ogologo, ọ na-ekwukwa na e nwere ike ịsị na ị na-ahụ maka nri ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ. Kedu ka mgbu si malite?
Ụgwọ ịkwụ ụgwọ bụ ụgwọ kasị ukwuu maka nzukọ ọ bụla. Ebe ọ bụ na United States malitere ịchọta mmefu ego, atụmanya maka ịkasi obi kwa ụbọchị malitere ịmalite ngwa ngwa. N'oge a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ọganihu na-eji ndị na-arụ ọrụ ego. Nchịkọta weebụ dị otu n 'ụzọ dịka o si agbaso otu atụmatụ.
3 Ihe Mere Nchọpụta Nchọpụta Outsource Search Engine Optimization
Tupu ị họrọ ịchọta njikarịcha njirimara gị, ọ dị oke mkpa ịtụle uru na ịba uru.
Ịkwụ ụgwọ Iri
Nchọpụta nke Weebụ dịtụ iche na outsourcing omenala. N'ihi na weebụ bụ usoro zuru ụwa ọnụ, ị nwere ike na-enweghị ezigbo mgbalị iji nweta ozi dị mkpa na ihe nke sekọnd. Mgbe ị na-ahọrọ ịchọta njikarịcha search engine, enweghi ike inwe oke nkwekọ bara uru.
N'ebe a, ụgwọ nke nchịkwa na-egosipụta ụdị ọrụ. Ndị na-ahazi site na mba ndị ka na-emepe emepe ga-enwe ike ịnye gị nkwụghachi ụgwọ n'ihi na ọ dị iche n'iche anya maka nkasi obi kwa ụbọchị.
Ihe ndị ọkachamara
Dịka m kwuru, nhọrọ kachasị mma ị ga - ahọrọ bụ iji nchịkwa nke nzukọ kachasị mma. Ka o sina dị, akụkụ buru ibu nke ndị mmadụ n'ozuzu ha enweghị ego dị ukwuu maka ịmepụta ego. N'ihi enweghị ego, ha na-achọ ịrụ ọrụ njikarịcha search na nsogbu nke onwe ha.
Echiche buru ibu Were otutu oge
N'adịghị iche na usoro ndị ọzọ pụrụ iche, njikwa njikwa search engine. bụ usoro na-ewe oge. Ọ bụla ụlọ ọrụ ga-enwe ọrụ dị iche, nke ga-ejikwa ụdị ụdị mgbasa ozi a. Mmezu nke outsourcing SEO ọrụ na-ewe oge, mana ọ bara uru.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ ịmalite ntinye aka na ebe nrụọrụ weebụ na-eme ka ọ dịkwuo mma na-atụle ya ka ọ bụrụ ndokwa ogologo oge. N'ọnọdụ ọ bụla, isiokwu nke ego fọdụrụ.
È Nwere Ihe Ọghọm nke Outsourcing SEO?
Dị ka ha na-ekwu, ọ dịghị rose nwere enweghị ogwu. Ihe na-adịghị mma maka nzukọ ahụ bụ naanị ụgwọ ọrụ ị ga-eche ihu mgbe ị na-emepụta SEO gị. Ma eleghị anya, ọ bụ oge iji gwa gị njikarịcha nchọgharị gị Source .